गोकुल बाँस्कोटाकै अघि डिला संग्रौलाले भनिन्- पूर्वमन्त्रीज्यूको ७० करोडको टेप कता गयो ? - Web Tv Khabar
गोकुल बाँस्कोटाकै अघि डिला संग्रौलाले भनिन्- पूर्वमन्त्रीज्यूको ७० करोडको टेप कता गयो ?
चैत्र २३, २०७७ सोमवार १४:३० बजे
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा.डिला संग्रौलाले सरकार र भ्रष्टाचार एकअर्कामा परिपुरक भएको दाबी गरेकी छिन् ।
उनले आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गरिन् ।
‘पूर्व सञ्चारमन्त्रीले भन्नुभएको ७० करोडको टेप पनि कहाँ पुग्यो थाहा छैन, यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले केही कारबाही गर्न सकेको छैन,’ डा.संग्रौलाले भनिन् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. संग्रौलाले संसद बैठकमा राखेको धारणा विस्तृतमा:
१. लामो संघर्ष र बलिदान पछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवमूल्यन, संविधान माथि प्रहार र जनविरोधी क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तासिन भएदेखिनै गरेकै हन् । त्यसैले यो सरकार अकर्मण्य, अपारदर्शी, असंवेदनशील र सत्तालोलुपताले भरिएको घैँटो जस्तै भएको छ । जनताप्रति अनुत्तरदायी खड्क– सत्ता स्वभावले नै अधिनायाकवादी र सर्वसत्तावादी छ । यसको चाडोभन्दा चाडो वर्हिगमन आजको आवश्यकता हो ।
३. भ्रष्टाचार र सरकार एकअर्काका परिपूरक भएका छन् । धेरै टाढा नजाउँ तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको ७० करोडको अडियो डिल प्रकरण बाहिरियो । राजीनामा आयो । कारवाही भएन । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भष्ट्राचार र ओम्नी ग्रुपसँग ठेक्का गर्दा भएको अनियमियतामा कारवाहीको लागि सर्वाजनिक लेखा समितिले तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई इंगित गरिसकेको छ । यस्तै भर्खरै वनमन्त्रीले वैज्ञानिक वन नीति खारेज गर्दा करोडौं रकम दिन आए आफै भन्छन् । कस्तो लज्जास्पद ! त्यसैले इतिहासमा यो सरकार सबैभन्दा भष्ट्राचारी सरकार हो । तर प्रधानमन्त्री भष्ट्राचारमा शून्य सहनशिलता भन्न छोडदैनन् ।